Green Card Lottery တွင်ပါ ၀ င်သောအမှားများ
DV Lottery ကိုအနိုင်ရခြင်းသည်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများသည်လည်းသင်တန်းသားများကိုယ်တိုင်အပေါ်မူတည်သည်။ ကံကောင်းတဲ့သူ ၅၀,၀၀၀ ထဲကို ၀ င်ဖို့အတွက်ထီကိုလျှောက်တဲ့အခါအရမ်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်း (သို့) သတိမထားမိခြင်းကြောင့်အမှားအများစုသည်သင်၏လျှောက်လွှာပုံစံအားအရည်အချင်းမပြည့်မှီစေနိုင်ပါ။
DV Lottery 2022 ရက်ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့် Diversity Visa Lottery ၏ရက်စွဲကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာများကိုအောက်တိုဘာ ၇ မှ ၂၀၂၀၊
ယူအက်စ်အေရှိအိမ်ယာငှားရမ်းခြင်း - အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်သင်ဟာကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Green Card ကိုလက်ခံရရှိပြီးအမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ မည်သည့်ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမှုနှင့်မဆိုအိမ်အသစ်တစ်ခုမှဘ ၀ သစ်ကိုစတင်သည်။ ငှားရမ်းခအတွက်ဘတ်ဂျက်ရဖို့၊ ဘယ်လိုအိမ်ရာကိုရွေးချယ်ရမယ်၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကောင်းတဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါရစေ။
အရေးကြီးတယ်။ အစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားသူများ၊ မတူကွဲပြားသောဗီဇာထီဆုရရှိသူများနှင့်အမေရိကန်မှ ၀ င်ခွင့်မရသည့်အခြားတရား ၀ င်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများကိုပိတ်ပင်ထားသည့်သမ္မတ Donald Trump ၏ကြေညာချက်ကို ၀ ါရှင်တန်ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ဆို့ထားသည်။ သမ္မတကြေငြာချက်သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိအမေရိကန်သို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအများဆုံးပိတ်ပင်ထားသည်။
Green Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတူညီကြသည်။ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ရန်အထူးခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးနောက်ပထမဆုံးအလုပ်ရှာခြင်းလုပ်ငန်းသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်ခက်ခဲနိုင်သည်။
Green Card ကိုင်ဆောင်သူ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား
Green Card ကိုင်ဆောင်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့်နေထိုင်သူသည်မဲပေးပိုင်ခွင့် မှလွဲ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အခွင့်အရေးအားလုံးကိုရရှိသည်။ ယူအက်စ်၏အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများသည်မိသားစုကိုကာကွယ်ရန်၊ ဗီဇာမပါဘဲနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်၊ အခွင့်သာသောအသုံးအနှုန်းများဖြင့်ချေးငွေနှင့်ပေါင်နှံရန်၊ ပညာရေးအတွက်အထူးလျှော့စျေးများ၊ ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်ပညာသင်ဆုများရရှိရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်နှင့်အခြားများစွာသောအခွင့်အရေးများရှိသည်။
DV Lottery ကိုအနိုင်ရပြီးယူအက်စ်ကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
DV ထီကိုအနိုင်ရခြင်းနှင့် Green Card ရရှိခြင်းတို့သည်ရှည်လျားသောလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကယူ။ အက်စ်။ ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အားမည်မျှကုန်ကျနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။
သင်၏ Green Card ကိုငြင်းပယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ
DV Lottery ကိုအနိုင်ရခြင်းသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ကဒ်ပြားကို ၁၀၀% အာမခံချက်မပေးပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်တွင်ဗီဇာထုတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်လိုချင်သောအဆင့်အတန်းပေးရန်ငြင်းဆန်သည်။
DV Lottery (ကလေးများအပါအ ၀ င်) အနိုင်ရသူတိုင်းသည်သံရုံးရှိ Green Card အင်တာဗျူးမတိုင်မီဆေးစစ်ရမည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (IOM) ကဆောင်ရွက်သည်။
အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုဖော်ရွေသော်လည်းရေမြှုပ်ကောင်မလိုပါ။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံသား၊ အစိမ်းရောင်ကဒ်ပြားနှင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကူညီနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဆွေမျိုးများသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုအားကိုးနိုင်သည်ဟုသူတို့ကိုသင်ယုံကြည်ရမည်။
DV ထီ 2021 ရလဒ်များ
၂၀၂၀၊ ဇွန် ၆ ရက်မှစ၍ DV-2021 Green Card Lottery အစီအစဉ်၏ရလဒ်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ကအနိုင်ရသူတစ်ယောက်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကြည့်ရအောင်
DV ထီနှင့် Coronavirus (COVID-19)
ကူးစက်ရောဂါသည်လက်ရှိ DV-2021 ထီအဖွဲ့ ၀ င်များကိုပါထိခိုက်နိုင်ပြီး DV Lottery 2022 ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကျင်းပမည်လား။
DV Lottery 2022 ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည်လား။
ဤတိုတောင်းသောဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Diversity Visa Lottery 2022 ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမှန်တကယ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးယင်း၏ရက်စွဲများသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
ပိုက်ဆံ, ငွေ, ပိုက်ဆံ ... သေချာတာပေါ့, ဒီထီအမျိုးအစားအားလုံးပါဝင်သူများအဘို့အကြီးမားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်မည်အခကြေးငွေနှင့်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးအရာအားလုံးထဲကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါထီ DV-2021 ကိုခေါ်ပေမယ့်သူက 2019. အဘယ်ကြောင့်အတွက်စတင်သည်သလဲ?
အမေရိကန်အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီ 2021 နထေိုငျနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်အလုပ်လုပ်ရန်, ပြီးတော့သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်ရန်သင့်အရှိဆုံးရိုးရှင်းသောဥပဒေရေးရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုမှသာ 2019 ခုနှစ်ကြောင့် DV ထီ 2021, အနာဂတ်ကာလသို့ခုန်တူသောအသံ။ ကရောထွေး? အဆိုပါမတူကွဲပြားခြင်းထီ 2021 နှစျနှစျအစောပိုငျးကစတင်သည်ဘာကြောင့်လဲသိလိုပါသလား? ဖတ်နေ Keep!
အဆိုပါအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီလုပ်ငန်းစဉ်၏5ခြေလှမ်းများ
သငျသညျပြီးသားသိသည့်အတိုင်း, DV ထီ applications များသာနိုင်ငံတော် https://www.dvlottery.state.gov ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်အထူးပုံစံကနေတဆင့်အွန်လိုင်းလက်ခံခဲ့သည်နေကြသည်။ အွန်လိုင်း DV ထီမှတ်ပုံတင်ရေးသင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူချင်လျှင်နောက်တော်သို့လိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်5ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများရှိပါတယ်။
သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဆုရရှိသူခဲ့ကြသူဤလူအပေါင်းတို့ကိုလည်းအမှန်တကယ်ရှိပါသည်။ မည်သူမဆိုထို DV ထီအစီအစဉ်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပြီးမည်သူမဆိုအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ DV ထီအတှကျလိုအပျသမြှတို့အကြောင်းကိုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ
သင်ပညာရေးအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးသဘောပေါက်လျှင်, သင်ထားတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိသနည်း သငျသညျအခြို့သောအလုပ်အကိုင်အတွက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနှစ်ပေါင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါက, ထို့နောက်သင် eligibile နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းသည်သင့်ရထိုက်ခွင့်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်စစ်ဝန်အရာရှိများအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပို. ခက်ခဲသည်, သင်သည်အင်တာဗျူးမှာပေးနိုင်ပါသည်အထောက်အထားအပေါ်အခြေခံလိမ့်မည်။ သင်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းသောသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အဆင်သင့်ကိုရယူပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်။
သင် DV ထီလိုအပ်ပညာရေးအဆင့်ကိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါအားလုံး
တချို့က DV ထီညွှန်ကြားချက်ပင်ထူးချွန်ဆုံးလူတွေကရောထွေးစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ကလေးမွေးဖွားတိုင်းပြည်နှင့်ပညာရေး / လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ: တကယ်တော့အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့နှစ်ခုသာအဓိကလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားယခင်ဆောင်းပါးတွေထဲကတစ်ခုအတွက်တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုစကားပြောနှင့်ယခုကျနော်တို့ပညာရေး / လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်အသေးစိတ်အာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်။
အဆိုပါ DV ထီအစိမ်းရောင်ကတ်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဦးအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ကိုပိုပြီးလူသိများရရန်ရေပန်းအစားဆုံးနဲ့ရိုးရိုးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ထီနောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးအဘယ်အရာကိုအခါသင်သိသလား? ကျနော်တို့စာဖတ်မစောင့်, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်!
သင်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို, လိုအပ်အသက်, လိုအပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး, ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာမဆိုပိုက်ဆံလိုအပ်ပါသလား? နှင့်ပိုပြီး။
ကလေးမွေးဖွား, ပညာရေးသို့မဟုတ်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏တိုင်းပြည်ဓာတ်ပုံ: အ DV ထီ3အဓိကလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်။
အစဉ်အဆက်ကို USA မှပြောင်းရွှေ့အခြေချစဉ်းစားခဲ့သူမည်သူမဆိုအမေရိကန် Green Card အကြောင်းကိုသိကြသင့်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိမ်းရောင်ကဒ်ကရယူဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်နှင့်၎င်း၏အားသာချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲအဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲအမေရိကမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစဉ်းစားပါလျှင်စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင် DV ထီနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချို့သည်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဘာကြောင့်များနှင့်ကဘာလဲ? သူကားအဘယ်သူအနိုင်ရဘို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုနိုင်မလဲ?